🥇 ▷ Muxuu Samsung had iyo jeer ugu afjaraa koobiga Apple? ✅
Muxuu Samsung had iyo jeer ugu afjaraa koobiga Apple?
Muxuu Samsung had iyo jeer ugu afjaraa koobiga Apple? – Shaki la’aan, qaar badan oo ka mid ah astaamaha iyo naqshadaha astaamaha casriga hore ee Samsung ayaa si uun laga soo guuriyey iPhone-ka Samsung Apple.
Xaqiiqdii, anigu ma ihi taageere ugu weyn ee iPhones-kii ugu dambeeyay… Waxaan u maleynayaa inay qaali yihiin oo ka sokow, waa isku wax soo saar wadnaha sanad walba, in kasta oo ay leeyihiin SoC arxan daran iyo nidaam hawlkar ah oo karti badan oo karti leh. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa run in ay ahayd Apple oo abuuray dunidan cajiibka ah, halkaas oo aan ka soo qaadan karno taleefan gacmeed fudud, si aan u sameysanno waxyaabo badan oo kombuyuutar hore u baahnaan lahaa.
Ka dib oo dhan, bilowgii xafiiltankii Samsung vs Apple, Galaxy kii ugu horreeyay way xumaadeen… Android waqtigaas midkoodna ma caawin! Si kastaba ha noqotee, nashqadeynta iyo tayada khibradda isticmaaleha ayaa ka hartay wax badan oo la doonayo.
Samsung vs Apple “Marka wax ka fiican ma jiraan wax ka koobiyeyn ah wixii uu ninka kaa horreeyay sameynayay aad u badan!”
Jid ahaan, dhowr sano ka hor, dukumiinti gudaha ah ayaa soo galay internetka, kaas oo asal ahaan cadeeyay in Samsung ay wax badan oo dhiirigelin ah ka qaadatay iPhone of Apple. Waxaad ka aqrisan kartaa dukumintiga halkan.
Waxaas oo dhami, Samsung ayaa ugu dambeyntii helay dariiqkoodii, iyagoon wax yar uun ka dib bilaabin Qoraalkeedii ugu horreeyay! Tani wali inta aan eegaayo buugga xusuus-qor ee deriska
Waa wax aan la dafiri karin in Ogeysiiska hore uu ahaa qalab aakhirkii abuuray noocyo badan oo alaabooyin ah, Wajiga. Marka la soo koobo, hadaadan jeclayn dhamaan taleefoonada gacanta ee suuqa inay leeyihiin shaashado waaweyn… Just Samsung and your Galaxy Note is eedee!
Marka Samsung-kaan ayaa go’aansaday inuu abuuro waxsoosaarkiisa, kana tago iPhone… natiijooyinka waxay ahaayeen kuwa cajiib ah!
Sidii aan ku iri Liqid, O Galaxy S10 Waxay u badan tahay aaladda inay lahaato haddii aad jeceshahay adduunka adduunka Android. Dad badan ayaa mahad u leh dib-u-eegida One UI interface, Samsung waxay dhistaa tayo, iyo dabcan Samsung design. Tusaale kale oo kan ah waa khadka cusub ee taleefannada casriga ah Galaxy Note 10, oo qaatay S10 oo ku barbareeyay heer kale. (In kasta oo runtii aanan u arkin wax lagu qoslo inaan sameeyo go’aanno qaarkood lagu sameeyey nooca yar, nooca jaban)
Samsung had iyo jeer waxay ku dhammaataa koobiyeynta dhaqdhaqaaqa badan ee Apple. Had iyo jeerna, waxay ku dhammaataa sameynta sawir xumo. (Samsung ayaa tirtirtay fiidiyowyada meeshii ay ku raaxaysatay ka qaadista ‘Audio Jack’)
Ka dib oo dhan, 2015 markii la bilaabay Galaxy S6, soosaaruhu wuxuu iska daayay caaga si uu ugu dul maro naqshad aad ugu eg iPhone waqtiga. Furitaanka taleefan gacmeed casri ah oo ku saleysan aluminium aluminiin ah iyo galaas hore iyo gadaal. Laakiin markii la bilaabay “iPhone X” ee 2017, Apple wuxuu go’aansaday inuu iska daayo aluminiumka si uu ugu sharaxo birta birta. Ma qiyaasi kartaa yaa sidoo kale bilaabay isticmaalka aluminium dhamaadka ugu sareeya? (Fiiri fiidiyowga hoose, ka bilow 14-naad)
Sidoo kale, hadaadan xasuusanin, horraantii sanadkan Samsung waxay bog ka qaadatay shirkadda Apple, waxayna bilawday kala duwanaanshaha Galaxy S oo ka kooban 3 taleefanno gacanta ah. Soo bandhigida ‘Galaxy S10e’, oo salka ku haysa Koonfurta Kuuriya Koonfurta ‘iPhone Xr’.
Maaha in la xuso ka bixitaanka ‘Audio Jack’ ee ay Samsung ku raaxaysatay xooggiisa oo dhan! Ku tartamaya suuqgeynta fiidiyowga … in dhammaantood la tirtiray, inuusan uga tagin wax raad ah internetka.